Google ayaa soo jeedinaysa raadinta ku salaysan isticmaalayaasha hawlahoodii dhawaa | BehMaster
Bogga ugu weyn/Seo/Google ayaa soo jeedinaysa raadinta ku salaysan isticmaalayaasha waxqabadkoodii u dambeeyay
Google ayaa soo jeedinaysa raadinta ku salaysan isticmaalayaasha waxqabadkoodii u dambeeyay
Waxaa laga yaabaa 6, 2020
Google hadda waxa ay soo bandhigaysaa weydiimo raadin la soo jeediyay oo ku salaysan hawlihii u dambeeyay. Soo jeedintu waxay u muuqataa sidii isku xidhka hoose ee baararka raadinta oo leh ereyga wax ka beddelka oo la dhiirraday oo farta laga saaray, sida hoos lagu arkay.
Qaabka soo jeedinta raadinta cusub ee Google ee ku salaysan hawshii isticmaale ee dhawaa
Talooyinka la gaaryeelay, ee markii hore ay ka warbixiyeen Booliska Android, ayaa noqon kara kuwo aad u dhib yar.
Sida ay u shaqeyso. Kahor intaanan raadin "qeylada baabi'ineysa taleefoonnada gacanta," waxaan sameeyay raadinta "google home." Iyada oo ku saleysan taariikhdaas, Google ayaa markaa soo jeedisay weydiimo asal ahaan isku dara labada weydiimood iyo dunta guud ee Kaaliyaha.
Waa kan sida uu u ekaa muuqaalkan:
Su'aasha 1: "google home" > Weydiinta 2: "Buuqa joojinaya taleefoonnada dhegaha" > Google's's weydii su'aasha la soo jeediyay: "qeylada baabi'inta taleefoonnada gacanta ee google-ka caawiya"
Riixitaanka soo jeedintu waxay u qaadaa isticmaalaha natiijooyinka raadinta su'aashaas.
Waxa ay u muuqataa in isticmaalayaashu ay tahay in la galiyo akoonadooda Google si ay u helaan talooyinkan raadinta. Waxaan dib u soo saaray raadintan taxanaha ah (iyo dhowr kale oo hoos looga hadlay) hal fadhi markii aan gudaha galay
Talooyinka raadinta ujeeddooyin kala duwan. Talooyinkan raadinta waxay sidoo kale u muuqdaan inay kicinayaan meel ka baxsan macnaha ganacsiga e-commerce. Hoos waxaa ah dhowr tusaale.
Talo soo jeedinta "Google search engine" waxaa loo malaynayaa inay saamaysay raadinta "wararka raadinta" ee aan sameeyay isla markiiba.
Wax yar ka hor intaanan raadin "disney," waxaan sameeyay raadinta "adeegyada qulqulka." Google ayaa soo jeedisay "qulqulka Disney".
Talooyinka qaar ayaa ka faa'iido badan kuwa kale. Kahor intaanan raadin "xafiiska boostada," waxaan raadiyay "boston," laakiin halkii aan soo jeedin lahaa "boostada boostada" ama wax la mid ah, Google wuxuu soo jeediyay "maqaayada boostada" (waxaa jira dhowr xarumood oo wax lagu cuno oo leh "boostada" magacyadooda masaafo baabuur oo goobtayda ah).
Sababta aan u danayno. Soo jeedinta raadinta shakhsi ahaaneed waxay ka caawin kartaa isticmaalayaasha inay helaan waxay raadinayaan, iyo xaaladaha qaarkood, xitaa waxay saameeyaan dabeecadda iyagoo u soo bandhigaya ikhtiyaarrada laga yaabo inaysan si kale u tixgalin.
Tilmaamo la mid ah, sida "baaritaannada la xidhiidha" iyo "dadku sidoo kale way waydiiyaan" sanduuqa ayaa jiray in muddo ah, laakiin meelaynta talooyinkan cusub ee raadinta ee sare ayaa ka dhigaysa mid caan ah waxayna u muuqataa inay calaamad u tahay in Google ama uu u arko inay tahay soo jeedin ka wanaagsan ama tijaabinaysa ka qaybgalka isticmaalaha.
Ma cadda sida saxda ah waxa, haddii ay jiraan, "dhaqdhaqaaqyadii dhawaa" Google u isticmaalo si uu u soo saaro talooyinkan ka baxsan taariikhda raadinta. Waxaan la xiriirnay Google-ka si aan faallo uga helno oo aan dib u cusbooneysiin doono halkan haddii aan wax badan ka ogaanno.
Sannadkii hore, Google waxa ay bilawday in ay soo bandhigto talooyinka shakhsi ahaaneed ee bogga guriga ee xarunta wax iibsiga ee Google iyada oo ku salaysan wax iibsiga iyo taariikhda goobidda isticmaalayaasha.
Talo Pro: Sida loo helo oo loo hagaajiyo 404 khaladaad oo runtii muhiim ah si aad dib ugu guuleysato taraafikadaada
Suuqgeynta Twitter: Hagaha Ganacsiga oo Dhamaystiran